Caalamka Online » Maxaa ka soo kordhay Xasuuqa dawlada Mayanmar ugaysanaysa Muslimiinta Rohinga
Maxaa ka soo kordhay Xasuuqa dawlada Mayanmar ugaysanaysa Muslimiinta Rohinga
February 8, 2018 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Hay’ada Amnesty International ayaa sheegay in ciidamada Myanmar ay kufsadeen, afduubeen ayna si ula kac ah gaajo ugu dileen muslimiinta Rohingya, iyagoo dadaal ugu jira sidii ay noolal xumo aan loo dulqaadan karin” ugu noolaan lahaayeen xubnaha kooxa laga tirada badan yahay islamarkaana ay dantu ku qasabto inay ka cararaan dalkaasi.
Warbixin ay soo saartay Arbacadii, ayaa kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku andacoodeen inay wali jirto kala sooca iyo isir nacaybka lagu hayo muslimiinta Rohingya, ku dhawaad ​​690,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa ka qaxay Myanmar tan iyo markii ay dowladdu bilowdey dagaal xooggan iyo xasuuqa ka dhacay waqooyiga Rakhine bishii Agoosto.
Amnesty ayaa sheegtay in ciidamada amniga Mayanmaar ay boob iyo dhac u geystaan qoysaska Rohingya oo isku dayaya in ay u cararaan Bangladesh iyada oo qaar ka mid ah haweenka iyo gabdhaha laga afduubtay tuulooyinkooda, taasoo keentay in ay ku noolaadaan cabsi.
Si kastaba ha ahaatee, dadka Rohingya ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee ay uga cararayaan dalka ay tahay cunto yaraan.
Dildar Begum, oo 30 jir ah oo ku noola tuulo u dhow magaalada Buthidaung ee gobolka Rakhine, ayaa u sheegay Amnesty International inaysan awoodin inay helaan cunto ku filan taasina ay tahay sababta ay uga cararayaan dalkooda.
Cunno yaraanta ayaa waxa sabab u ah ama keenay tallaabooyinka ciidamada amniga ee Myanmar, kuwaas oo ka xannibaya muslimiinta Rohingya inay soo goostaan ama aadaan beeraha bariiska, suuqyada iyo inay helaan gargaarka bani’aadamnimada, ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty.